Taliyaha Ciidanka Melleteriga Dowladda Federaalka oo isku Day Dil Ka Badbaaday.
Sunday April 09, 2017 - 13:22:48 in Wararka by Super Admin
War goordhow nagasoo gaaray degmada Hodon ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in camaliyad istish-haadi ah lala helay kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen saraakiil katirsan ciidanka Melleteriga dowladda Federaalka.
Jugta qarax weyn ayaa laga maqlay agagaarka wasaaradda G/dhigga oo ay ku shaqeeyaan saraakiisha ugu sarraysa ciidanka DF-ka.
War rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada Al Shabaab ayay ku sheegatay mas’uuliyadda weerarka oo ahaa mid naf-hurnimo.
Sida ay baahisay idaacadda Andalus gaari walxaha qarxa lagasoo buuxiyay oo uu kaxanayayay dagaalyahan istish-haadi ah ayaa lala helay kolonyo gaadiid ah.
Xilligii uu weerarku dhacayay ayay gudaha Wasaaradda G/dhigga ka socotay munaasabad ay xilalka kula kala wareegayeen mas'uliyiinta wasaaradda G/dhigga.
Qaraxan ayaa imaanaya laba maalmood kadib markii Max’med Cabdullaahi Farmaajo Hoggaamiyaha DF-ka uu ku dhawaaqay dagaal hor leh oo ka dhan ah Al Shabaab waxaana muuqata iy DF-ka looga hormaray dagaalka.